တရုတ် Down Jacket စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Eigday
1. mylar thermal Lining ပါသော ၁၀၀% နိုင်လွန်အထည်
၂။ ပေါ့ပါးပြီးအသက် ၀ င်သောဖက်ရှင်-အသက်ရှူနိုင်သည့်အလွန်ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများ၊ ရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်း၊ သက်တောင့်သက်သာနိုင်လွန်ဖျင်နှင့်ချုပ်ရိုးတံဆိပ်ခတ်ခြင်း ၎င်းတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သော windproof နှင့်နွေးထွေးသောအရည်အသွေးတို့ပါ ၀ င်သည်၊ အတားအဆီးမဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြင့်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်မင်းရဲ့အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးထူးခြားတဲ့နွေးထွေးမှုကိုခံစားနိုင်စေဖို့သေချာပါစေ။
3. SMART HEAT ACROSS BODY- စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအလျင်အမြန်အပူပေးပါ၊ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအပူပေးဓာတ် ၃ ခုသည်အဓိကခန္ဓာကိုယ်နေရာများ (ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ဝမ်းဗိုက်၊ နောက်ကျော) ခလုတ်ကိုရိုးရိုးလေးနှိပ်ရုံဖြင့်အပူချိန်ညှိချက်များ (အမြင့်၊ အလတ်၊ အနိမ့်) ကိုညှိပါ။
4. ၂၀၂၁ တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းများဖြစ်သော mylar thermal Lining သည်အရေပြားနှင့်လိုက်ဖက်ညီသောအကောင်းဆုံးကာဗွန်ဖိုင်ဘာအပူပေးစနစ်ဖြစ်ပြီးသင်ပိုလျှံသောအပူများကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲစျေးကွက်တွင်အခြားအပူခံများထက်ပိုမိုနွေးထွေးမှုကိုရရှိစေသည်။
၅။ PREMIUM QUALITY- အရည်အသွေးမြင့် hardware နှင့်ရေစိုခံ zippers၊ လွယ်လွယ်ကူကူသုံးနိုင်သောအိတ်များနှင့်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောအဖုံးကိုအထူးသဖြင့်ချမ်းအေးသောနံနက်ခင်းများနှင့်လေထန်သောနေ့များတွင်အပိုကာကွယ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ မိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ၀ န်ထမ်းများအတွက်စံပြခရစ္စမတ်လက်ဆောင်
၆။ စက်ဖြင့်လျှော်ရန် - အထုပ်တွင် ၁* unisex အပူပေးအ ၀ တ်၊ ၁* ဘက်ထရီ၊ ၁ ထုပ်၊ လက်ဆောင်သေတ္တာ၊ ၁* အဝတ်လျှော်အိတ်၊ ၁* အားသွင်းစက်နှင့်ရေစိုခံအိတ် ၁ ခုတို့ပါ ၀ င်သည်။
LIGHTWEIGHT & BREATHABLE FABRIC-Breathable ultra light material, water-resistant coating, သက်တောင့်သက်သာနိုင်လွန်ဖျင်နှင့် hem တံဆိပ်တို့ကနွေးထွေးမှုကိုပေးသည်။ ၎င်းတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သော windproof နှင့်နွေးထွေးသောအရည်အသွေးတို့ပါ ၀ င်သည်၊ အတားအဆီးမဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြင့်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်မင်းရဲ့အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးထူးခြားတဲ့နွေးထွေးမှုကိုခံစားနိုင်စေဖို့သေချာပါစေ။
SMART HEAT ACROSS BODY- စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအပူအလျင်အမြန်၊ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအပူပေးဓာတ် ၄ ခုသည်အဓိကခန္ဓာကိုယ်နေရာများ (ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ဝမ်းဗိုက်၊ လည်ပင်းနှင့်ကျောလယ်)၊ ခလုတ်ကိုရိုးရိုးလေးနှိပ်ရုံဖြင့်အပူပေးဆက်တင် ၃ ခု (အမြင့်၊ အလတ်၊ အနိမ့်) ကိုညှိပါ။
အဆင့်မြှင့်ထားသောဒီဇိုင်း-SILVER mylar thermal Lining အသစ်သည်အသားအရေနှင့်လိုက်ဖက်ညီသောအကောင်းဆုံး POLY HEAT SYSTEM ဖြစ်ပြီးသင်ပိုလျှံသောအပူများကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲစျေးကွက်တွင်အခြားအပူခံများထက်ပိုမိုနွေးထွေးမှုကိုရရှိစေသည်။ အသိမှတ်ပြု 5200mAh ဘက်ထရီဖြင့် ၁၂ နာရီကြာအပူပေးပါ။
PREMIUM QUALITY- အရည်အသွေးမြင့် hardware နှင့်ရေစိုခံ YKK ဇစ်များ၊ လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုနိုင်သောအိတ်များနှင့်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောခေါင်းစွပ်ကိုအထူးအေးမြသောနံနက်ခင်းများနှင့်လေထန်သောနေ့များတွင်အပိုကာကွယ်မှုအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
နှင်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ တောင်တက်ခြင်း၊ စခန်းချခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ လျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ ငါးမျှားခြင်း၊ အမဲလိုက်ခြင်း (သို့) ဆောင်းရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတို့တွင်ရုံးလုပ်ငန်းနှင့်ရုံးသုံးလုပ်ငန်းကဲ့သို့ပျော်မွေ့ရန်သင့်အတွက်နွေးထွေးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ရာသီဥတု။
US, EU, UK & AU တို့ပါ ၀ င်သော Dual Battery Charger ပါ ၀ င်သည်။
လျှော်စက် - အထုပ်တွင် 1*unisex အပူပေးအ ၀ တ်၊ 1pcs*အဝတ်လျှော်အိတ်၊ 1pcs*PE အိတ်၊ 1pcs*charger, 1pcs*manual, 1pcs*desiccant, 1pcs*battery တို့ပါ ၀ င်သည်။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏အပူပေးအ ၀ တ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မ ၀ င်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးပါမည်။
နောက်တစ်ခု: နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်းအတွက် SAVIOR Outdoor Waterproof Waterproof Windproof Heated Gloves